नेपाल भित्रियो विश्वभर लोकप्रिय कियाको 'मिड–एसयुभी सेल्टोस', मुल्य कति ? - Seto Khabar
ठूला नेतालाई झापड हान्न भन्दै पेरिसडाँडा पुगेकी बालिका खड्का पक्राउ
कोभिड–१९ संक्रमणबाट पहिलो पटक नेपाली सेनाको मृत्यु
नेकपाको सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा शुरु
तेल बोकेको ट्यांकर त्रिशूलीमा खस्यो
बीपी कोइराला स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीको प्रदेश दुईको प्रथम प्रादेशिक भेला महोतरीमा सम्पन्न
होमपेज / अटो
नेपाल भित्रियो विश्वभर लोकप्रिय कियाको ‘मिड–एसयुभी सेल्टोस’, मुल्य कति ?
४ पुष २०७६, शुक्रबार १७:४७
काठमाडौं । भारतमा बजार प्रवेश गरेको १० दिनमै सर्वाधिक बिक्री हुने मिड–एसयुभीबन्न सफल कियाको सेल्टोस नेपाल भित्रेको छ ।
नेपालका लागि किया गाडीको अधिकृत वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. ले सेल्टोस नेपाल ल्याएको हो । कियाको भारत स्थित प्लान्टमा उत्पादित गाडी पहिलोपटक नेपाल भित्रेको हो । कोरियाली अटो निर्माता कियाले सन् २०१९ बाट भारतमा प्लान्ट राखेर सेल्टोस उत्पादन थालेको हो ।
भारत–६ (Bhaarat-VI) इन्जिन जडित सेल्टोस कियाको ग्लोबल मोडल हो । यसले विश्वभरका मिड एसयुभी पारखीबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएको छ । सेल्टोस कै कारण किया भारतको चौथो नम्बरको कार ब्रान्ड बन्न सफल भएको छ ।
कन्टिनेन्टलले भारतमा निर्मित अन्य मोडल पनि नेपाल ल्याउने कम्पनीकाप्र मुख सुहृद घिमिरे बताउनुहुन्छ । सेल्टोसमा १० इन्चस्क्रिन, बिओएसई (BOSE) म्युजिक सिस्टम, फ्रन्ट र ब्याक एलइडी लाइट, एअर प्युरिफायर, डी–कटस्टेरिङ (D-Cut Steering), युभीग्लास (UV Glass) जस्ता विशेषता छन् । यो सेग्मेन्टका अन्य ब्रान्डमा यस्ता विशेषता छैनन् ।
गत भदौमा सम्पन्न नाडा अटो सोमा बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई प्राथमिकता दिएर यो गाडी उपलब्ध गराउने कम्पनीको योजना छ । ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँदेखि ८० लाखसम्म पर्ने सेल्टोसका एचटिके ](HTK), एचटिके (HTK+), एचटिएक्स (HTX), एचटिएक्स प्लस (HTX+) भेरियन्ट नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतमागत अगस्टबाट यसको बिक्री सुरु भएको थियो । अटो पन्डित्जका अनुसार सेल्टोस लन्च भएको पहिलो महिनामै आफ्नो सेग्मेन्टको एसयुभी पारखीमा लोकप्रिय बनेको थियो ।
हुन्डाइको क्रेटा, निसानको किक्स, जिपकम्पास १.४ लाई सेल्टोसको प्रतिस्पर्धी मोडल मानिन्छ । कन्टिनेन्टलले ३० वर्षदेखि कियाका गाडी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ ।
५० प्रतिशत सिटमा निजि विमान संचालकले यात्रु नबोक्ने
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ७११ जना कोरोना संक्रमित